Archives des voasambotra - Midi Madagasikara
Antsirabe : Mpamaky trano efa-dahy voasambotra
Redaction Midi Madagasikara 8 mars 2014 Antsirabe, mpamaky trano, voasambotra
Efa tena raindahiny amin’ny famakiana trano ireto jiolahy tratra tao amin’ny fokontany tao atsinanan’ny vohitra ireto. Iraika ambin’ny roapolo taona moa ny zandriny indindra, telo ambin’ny telopolo taona kosa ny zokiny, « barre à pince » sy antsibe ary famaky no fitaovana entin-dry zalahy ireto amin’izany, ary efa trano fito amin’izao no novakian’izy ireo. Kojakoja fampiasa ao…
Anjozorobe : Mpamatsy basy dahalo voasambotra
Redaction Midi Madagasikara 6 mars 2014 Anjozorobe, Mpamatsy basy dahalo, voasambotra
Mass 36 sy bala 14 mifandraika amin’izany no tao anaty sakosy nentin’ity rangahy iray mpivarotra fitaovam-piadiana Jiolahy raindahiny no tratra tany Anjozorobe, ny 15 febroary lasa teo. Olona tsara sitrapo eny an-toerana no nampahafantatra ny zandary fa misy olona mitady mpividy basy. Nandray ny andraikiny avy hatrany ka tonga teny ary nanao ny vela-pandrika ny…
Mandoto : Dahalo 8 lahy voasambotra, voatifitra ny iray
Redaction Midi Madagasikara 27 novembre 2013 Dahalo, Mandoto, voasambotra, voatifitra ny iray
Nahitam-bokatra indray ny hetsika nataon’ny zandarimaria eto amin’ny faritra Vakinankaratra. Ravan’izy ireo indray mantsy ny andian-dahalo nikasa hanao fanafihana tao amin’ny faritra andrefan’i Vakinankaratra iny,izay faritra mena tokoa amin’ity asan-dahalo ity. Tao amin’ny kaominina Vasiana no voasambotra izy valo lahy ireto, voalaza fa nampitaraina sy nampihorohoro ny mponina tokoa. Tao amin’ny fokontany Beakanga no nisamborana…